၀၅:၅၅၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က NATURAL OUR WORLD ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး အတွက် ပိတ်ပင်မှုအပြင်အဆင်များကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၀၅:၅၄၊ ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်) ဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၅:၅၄၊ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က NATURAL OUR WORLD ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၄:၅၁၊ ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 8.25.96.124 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၇:၂၉၊ ၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 117.55.250.46 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၄:၁၂၊ ၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Learning U ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၈:၀၆၊ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က J3l leper12 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (အကောင့် များစွာ ဖန်တီးမှု)
၀၉:၀၇၊ ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က J3l leper ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၈:၅၇၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Khu Bue Reh ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (harassment, rude comment)
၀၈:၅၅၊ ၂၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.11.195 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၇:၀၇၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 117.55.250.126 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၉:၃၁၊ ၁၉ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 65.18.124.171 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၇:၃၄၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 103.217.158.217 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၅:၄၁၊ ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 103.217.158.221 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၃:၀၉၊ ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.11.16 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၇:၅၈၊ ၂၆ ဇွန် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Zero One Technology ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု)
၁၅:၃၈၊ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 46.139.36.29 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၇:၄၉၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က That Tun Aung That Tun Aung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု: Vandalism only account.)
၁၇:၀၀၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Min Chit Thu (Netso) ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု)
၀၄:၅၉၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 5.188.5.73 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၈:၀၂၊ ၉ ဇွန် ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Kyawminthu95500 ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၄:၄၀၊ ၃၁ မေ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က PICOspark ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (သက်ရှိထင်ရှားလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ပေါ်လစီအား ချိုးဖောက်မှု)
၀၇:၁၀၊ ၁၄ မေ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က MM Android Media ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၄:၅၀၊ ၄ မေ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Mingyinaygyi ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၇:၄၄၊ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Thazintunapp ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၅:၃၁၊ ၂၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Nainghung ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၆:၅၅၊ ၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 117.18.228.109 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၆:၁၂၊ ၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Thazintunapp ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၄:၂၈၊ ၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 65.18.121.27 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၆:၄၃၊ ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 65.18.120.121 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စာမျက်နှာများတွင် ပေါက်တတ်ကရများ ထည့်သွင်းမှု)
၁၇:၃၆၊ ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 2400:ac40:831:99d8::1 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၁:၃၂၊ ၂၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က UPhyoekokowin ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၁:၂၆၊ ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 69.160.30.158 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၆ လ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်)
၁၈:၁၀၊ ၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 2804:d55:52c7:f200:d134:1508:d39a:d5be ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၉:၅၂၊ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Sa Pa Sar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်)
၁၂:၅၉၊ ၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က အောင်ကျော်စိုး ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု: This is 4th time creation ofaweblog in user page that are recordings of non-Wikipedia activities.)
၀၉:၀၂၊ ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 116.86.120.202 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်မှု)
၁၅:၄၅၊ ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 2400:ac40:897:1c00:f6b5:29f7:2989:f2bd ဆွေးနွေး ကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ စာမျက်နှာ အား တည်းဖြတ်ခြင်းမှ သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၀၃:၅၆၊ ၃၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Lee pal kwar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
၀၈:၀၇၊ ၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Monaonh ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး အတွက် ပိတ်ပင်မှုအပြင်အဆင်များကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၂ ပတ် (အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပြောင်းလဲခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၇:၀၇၊ ၂၇ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Monaonh ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို မွန်ပြည်နယ် နှင့် ဝါရီရူးမင်း စာမျက်နှာများ အား တည်းဖြတ်ခြင်းမှ သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ပတ် (အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၁:၁၆၊ ၇ ဇွန် ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 69.160.26.217 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၁:၄၆၊ ၈ မေ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က အောင်ကျော်စိုး ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ကြော်ငြာရန်အလိုငှာ ဝီကီပီးဒီးယားကို အသုံးချမှု)
၁၆:၀၇၊ ၃ မေ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Zipmyanmar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အလိုအလျောက်ပိတ်ပင်ခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော အသုံးပြုသူအမည်)
၀၈:၂၃၊ ၂၉ မတ် ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Bloksha ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (သက်ရှိထင်ရှားလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ပေါ်လစီအား ချိုးဖောက်မှု)
၁၁:၄၃၊ ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က LeeLeeLarLar ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် အနန္တ (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (စွယ်စုံကျမ်း၌ ပါဝင်ရေးသားရန် မဟုတ်မှာ သေချာသည်)
၀၈:၅၀၊ ၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က Dr Kaung Zaw Gyi ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ နှစ် (အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (သက်ရှိထင်ရှားလူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ပေါ်လစီအား ချိုးဖောက်မှု)
၁၈:၃၀၊ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၉ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.2.44 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, အီးမေးကို ပိတ်ပင်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၅:၄၂၊ ၁၀ ဩဂုတ် ၂၀၁၉ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 37.111.4.220 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၁ ရက် (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်, မိမိ၏ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာကို တည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၂:၄၂၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၁၉ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 65.18.122.170 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
၁၂:၄၂၊ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၁၉ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က 65.18.121.221 ဆွေးနွေး ကို သက်တမ်းကုန်လွန်ချိန် ၃ လ (အမည်မသိ အသုံးပြုသူများသာ, အကောင့်ဖန်တီးခြင်းကို ပိတ်ထားသည်) ဖြင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သည် (ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ဆောင်မှု)
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/block/Ninjastrikers" မှ ရယူရန်